दलान नेपाल : युक्रेन र मधेश
मधेशमा जारी राजनितीक द्धन्द र मधेशी पार्टीहरुको पछिल्लो असफलतालाई कतिपयले भविष्यलाई उक्त घटनासंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर के मधेशी पार्टीहरुको पछिल्लो असफलता र हाल आकंलन गर्न थालिएको जटिल मधेशको यात्राले त्यही बाटो समात्ला ? यसमा सबैको आ आफना तर्क र विश्लेषण हुन सक्ला ? तर सबैले आजको मितीमा के बुझनु पर्छ भने मधेश र मधेशीको अस्तीत्व नेपाल भित्रकै अखण्डताको सिमामा हुनुपर्छ । यसलाई कुनै पनि बाहानामा अन्यत्र मोडिनु हुदैन । मधेशी पार्टीहरु भित्रै मधेशमा अलगावको राजनिती शुरु गरेका जयकृष्ण गोइत प्रतिको वढदो मोह होस वा वैज्ञानिक सिके राउतको लौट चले मधेश अभियान होस, यो सबैले मधेशको भविष्यको यात्रालाई वास्तवीक रुपमै जटील मोड तर्फ लैजान खाजेको देखिन्छ । तर अझै धेरै ढिलो भईसकेको छैन, यसलाई हामी युक्रेनको घटना जस्तै नदोहरिनका लागी केही गर्न सक्छौ ।
दोस्रो संविधानसभामा काग्रेस, एमाले ठुलो पार्टी भए लगतै मधेशको आम बैद्धिक जमातमा एउटा कुरा के सुन्न पाइन्छ भने अब मधेशले संघीयता पाउदै, संबीधान मधेश मैत्री आउदैनन । अब आन्दोलनको विकल्प छैन । र एउटा कुरा के निश्चित छ भने यदी अब मधेशमा आन्द्योलन भयो भने सडकमा भयावह भयावह नारा गुन्जिनमा कुनै दुईमत छैन । त्यसैले अहिले मुख्यगरी काग्रेसले महत्वपुर्ण ढंगले यसलाई सोच्न सक्नु पर्छ र ठोस रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । यदी यसरी नै सरकार दैनिक प्रशासन चलाएर बसीरहेको र एकातर्फ संविधानको मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गयो भने मधेश थप ज्वजलमान भईराख्ने छन ।
हालमा चर्चामा रहेको मधेश मानसिकता यदी साच्चिकै आन्द्योलनमा परिणत भए भने त्यसमा काठमाडौमा प्रकाशित मिडियाहरु सबै भन्दा ठुलो निशानामा पर्ने छन । हाल एक थरी विश्लेषहरुको बुझाईमा मधेशको द्धन्द सही व्यवस्थापन नहुनुमा नेपाली मिडियाको ठुलो भुमिका छ । समावेशी नारा धन्काउन पछि नपर्ने यी मिडिया पुर्णरुपमा एकपक्षिय सोचका साथ अघि वढी रहेको देखिन्छ । देशको आधा भन्दा वढी जनसंख्याको रुपमा रहेको मधेशी समुदायलाई जुन प्रकारलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ त्यसले ठुलो मुल्य चुकाउने पर्ने हुन्छ ।
यस सन्दर्भ यो संवाददाता आफै पनि नेपालको ठुलो दुई ओटा समाचार कक्षमा काम गरिसकेकाले नेपाली मिडियाहरु प्रति उठिरहेको प्रश्नलाई धेरै हद सम्म नाजायज भन्न मिल्दैन । केही महिना पहिला एउटा ठुलो समाचार कक्षमा काम गर्ने पहाडी मुलका पत्रकार साथीले सेयर गरेको कुरा सम्झन मन लाग्यो । चुनाव भन्द्या पहिला ती मित्रले सम्पादकलाई मधेशको एउटा स्टोरी मुख्य स्टोरीको रुपमा प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गरेछन, अनि सम्पादकले ती मित्रलाइ मधेशको इस्यूलाई त्यती प्राथमिकतामा नरख्न सुझाए रे । हो, यो अवस्था ती एउटा समाचार कक्षको मात्रै होइन, सबै समाचार कक्षको छ । मधेशी पार्टीहरुको राजनितीक हैसियतको आधारमा मधेशको समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्ने खतरनाक शैली नेपाली मिडियाहरुमा भित्रनु नत हाम्रो समाजको लागी फईदा जनक छ नत मिडियाकै लागी । पहिलो संविधानसभामा ठुलो हैसियतको साथमा मधेशी पार्टीहरु उदाए संगै काठमाडौका हरेक समाचार कक्षहरुले मधेशलाई बिटको रुपमा राख्ने कोशिस गर्न थाले तर हालै दोस्रो संविधानसभामा मधेशी पार्टीहरु पराजीत भएपछि ती बिट पनि समाप्त भएजस्तो आभास हुन थालेको छ । देशको आधा जनसंख्यामा रहेको मधेशी समुदायहरुको बारेमा दैनिक अखवारहरुमा दैनिक एक पेज पनि समाचार आउदैनन । म्यागजिन र टिभी, एफएकको के कुरा गर्नु ? मानौ सामाचार गैरमधेशी समुदायमा मात्रै फल्दो रैछ । यी सबै कुराहरु मथी मधेशमा चर्चा र विश्लेषण सुनिन थालेको छ । जसको प्रभाव कस्तो होला त्यो आफैमा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।